आजको राशिफल : २१ गते बिहीबार, यी राशिहरूकाे च’म्किने छ भाग्य !:: Mero Desh
आजको राशिफल : २१ गते बिहीबार, यी राशिहरूकाे च’म्किने छ भाग्य !
Published on: २१ श्रावण २०७८, बिहीबार ०२:१४
काठमाण्डौं।वि.सं.२०७८ साल साउन २१ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ अगष्ट ०५ तारिख। नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु श्रीशाके १९४२ । श्रावण कृष्णपक्ष । तिथि– द्वादशी,बेलुकी ०४ बजेर ०२ मिनेट उप्रान्त त्रयोदशी । नक्षत्र– आद्र्रा, अहोरात्र । योग–
हर्षण, रातको ०२ बजेर १८ मिनेट उप्रान्त बज्र काठमाडौं मा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २९ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ४८ मिनेट । दिनमान ३३ घडी १७ पला ।मेष राशि : न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा हुनेछ भने स’त्रु परा’स्त हुनेछन् । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रबाट सकारात्मक
नतिजा निकाल्न प्रशस्त समय खर्चनु पर्नेछ। आफूलाई मन पर्ने भौतिक सम्पती जोड्न पाउदा मन हर्सित हुनेछ ।साथै दाजुभाई तथा छिमेकिबाट सहयोग तथा उपाहार प्राप्तिको योग रहेकोछ । आफन्त तथा मनपर्ने साथीका साथ छोटो, रमाईलो तथा अर्थपूर्ण यात्रा हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
बृष राशि :आफन्त, साथिभाई तथा कुटुम्बसँग मन मुटा’व बढ्नेछ। खोज तथा अनुशन्धानमा दिएको समय त्यसै खेर जान सक्छ ध्यान दिनुहोला। मा’या प्रे’ममा सानो कुराले मन मु’टाव सिर्जना हुन सक्छ। खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्य स’म्बन्धी सम’स्या आउनेछ साझपख छोटो दुरिको यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेकोछ । बोल्दा वा कुनै निर्णय गर्दा ख्याल गर्नुहोला बोलिको गलत अर्थ लाग्ने तथा तपार्ईँ को निर्णय तपार्ईँ आफैलाई आत्म घा’ती हुनसक्छ ।
मिथुन राशि : बिद्यार्थीहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी हरुलार्ई सजिलै किनारा लगाउदै नतिजा आफ्नो पोल्टोमा पार्न सक्ने छन् । व्यापार व्यावसाय बाट मनग्गे धन सम्पती कमाउन सकिने हुँदा आवश्यक्ताहरु परिपूर्ती हुने छन् । सुन्दर तथा वि’लाशी वस्तुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर खिच्न सकिनेछ । सामाजिक कामहरु समयमा गर्न सकिने हुँदा मानसम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । रोकिएर बसेका कामहरु सजिलै सम्पादन गर्न सकिनेछ भने आर्थिक रुपमा सुदृड हुने समय रहेकोछ।
कर्कट राशि : स्वास्थ्य सम्व’न्धी सम’स्या आउने तथा उपचार खर्च बढेर जानेछ । ग’लत कामहरु भुलेर पनि नगनुहोला तुरुन्तै दण्ड तथा जरि’वाना तिर्नु पर्नेछ । पढाइ लेखाइमा समय दिएपनि अपेक्षित नतिजा ल्याउन मुस्किल रहेको छ । माया प्रे’ममा आजको दिन भेट नहुँदा नै राम्रो रहेकोछ भेटमा एक अर्कालाई अ’विश्वास गर्नाले नचाहँदा नचाहँदै छुट्टिनु पर्ने हुन सक्छ । व्यापार व्यावसाय खस्केर जाने ग्रहयोग रहेकोछ ।
सिंह राशि : पै’त्रिक धन तथा सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिने छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिने छ । साथिभाई तथा नातागोताबाट सहयोग पाइने हुनाले हरेक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सकिनेछ । भौतिक स’म्पत्ति तथा सवारी साधन जोड्न सकिनेछ । माया प्रे’ममा आ’त्मियता बढ्नेछ भने पति पत्नी बीच मायाको डोरो क’सिलो भएर जानेछ ।
कन्या राशि : राजनीति तथा समाजसेवीहरुले राज्यबाट लाभ पाउने समय रहेकोछ भने व्यापारमा समय लगानी गर्नेहरुले मनग्गे धन कमाउन सक्ने छन् । बुवा तथा बुवा सरहका मानिसबाट तपार्ईँको काममा सहयोग हुने छ भने आफन्त तथा सहयोगी हरुले तपार्ईँकै साथ दिनेछन् । मा’या प्रे’मको ब’न्धन क’सिने तथा पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजाको साथ पुरस्कार जित्न सकिनेछ । साँझपख व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
तुला राशि : समुदायको हक हितको निम्ती कामगर्ने अवसर आएपनि असजिला परिस्थिती हरुको सामना गर्नुपर्नेछ। पढाइ लेखाइमा ध्यान नजादा सफलता हात पार्न मु’स्किल रहेकोछ। व्यापार व्यावसायमा लगानी गरेपनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा मन दुखी हुनेछ । माया प्रे’ममा अ’विश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथीसँग सामान्य मन मु’टाव सिर्जना हुनेछ । धा’र्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको भएपनि बाटामा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ ।
वृश्चिक राशि : परिवार तथा आफन्त जनसँग मन मु’टाव बढ्नेछ भने पति प’त्नी तथा मा’या प्रे’ममा अ’विस्वास सिर्जना हुनेछ । सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा बिशेष ध्यान दिनुहोला दुर्घ’टना तथा अप्रिय घ’टना घ’ट्न सक्छ । बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्य सम्वन्धी सम’स्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकै हरुबाट धोका हुनेछ ।
धनु राशि : व्यापार व्यावसायमा देखिएका असहज परि बेसलाई भ’त्काउँदै थप लगानी गरी वि’लाशी बस्तुहरुको उपभोग गर्न पाइनेछ । पढाइ लेखाइमा भने जस्तो सफलता हात लाग्ने हुँदा आफु तथा शुभचिन्तकहरु खुशी रहने छन् । माया प्रे’ममा सामि’प्यता बढेर जानेछ । ईमान्दारिता पूर्वक गरीएको प्रयत्नले लक्ष्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । सांगठनिक टिम निर्माण गरी काम गर्दा भनेजस्तो आम्दानी गर्न सकिनेछ भने बिभिन्न भौतिक सम्पत्तिहरु जोड्न सकिनेछ ।
मक राशि : बिद्यार्थी हरुले पढाइ लेखाइमा राम्रो नतिजा ल्याई पुरस्कार जित्न सक्नेछन् । प्रे’ममा सा’मिप्यता बढेर जानेछ भने दा’म्पत्य जीवन सुखी रहनेछ । स’त्रु परा’स्त हुने तथा कुनै पनि न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँ कै पक्षमा फैसला हुने हुँदा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । सुख दुःखमा साथ दिनेहरु भेटिने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले अन्य व्यावसायमा पनी लगानी गर्ने अवसर आउनेछ ।
कुम्भ राशि : भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको कारोबार गर्दा वा प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । माया प्रे’ममा नचाहँदा नचाहँदै एक अर्काबीच छुट्टिनु पर्दा मनमा खल्लोपन महशुस हुनेछ। सन्तान तथा छोराछोरीसँग पनि मन मु’टाव सिर्जन हुने योग रहेकोछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला, पेट सम्ब’न्धी सम’स्या आउन सक्छ । पढाइ लेखाइमा समय दिन नसक्दा अरु भन्दा पछि परिनेछ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसायमा मन्दी आउनेछ ।
मीन राशि : तपार्ईँले शुरु गर्नुभएको काममा बिभिन्न वाधा तथा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । तपार्ईँले बनाएका गोप्य योजनाहरु सार्वजनिक गर्न केही समय पर्खदा राम्रो हुनेछ । खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा प्रशस्त समय खर्चिय पनि भने जस्तो नतिजा हात नलाग्न सक्छ । घर परिवार, आफन्त तथा आमासँग घरायसी कुरामा वि’वाद सिर्जना हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । कृषी तथा पशुपालन व्यावसायमा समय लगानी गर्नेहरुका लागि भने समय उत्तम रहेकोछ ।